Lucinda Riley: nku dị n'azụ Nzuzo nke Orchid | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ Lucinda Riley
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Novela
Lucinda Riley bụ onye edemede Britain dị mkpa nke pụtara ìhè n'ọgụ akwụkwọ maka akwụkwọ akụkọ ọ na-aga nke ọma. Kemgbe mbipụta nke Ihe nzuzo nke orchid, onye dere akwukwo merie imerime ndi na-agu akwukwo n’uwa nile. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 nke akụkọ ntolite, e bipụtara ọrụ Riley n'ọtụtụ mba na ihe karịrị nde 30 e rere.
Otu n'ime ihe ịga nke ọma kasịnụ bịara na 2014, na mwepụta nke usoro ahụ billionaire: Sistersmụnne nwanyị asaa. Onye ọ bụla n’ime akwụkwọ akụkọ ndị a ederela ndị na-eso ụzọ ya nabatara ya nke ọma. Nke a 2021 onye edemede dere: Nwanyị furu efu, nke asaa nke nchịkọta. Akwụkwọ ikpeazụ a ejiriwo ebe mbụ ịre ahịa n'ụwa niile maka izu.
1 Akwụkwọ kacha mma site n'aka onye edemede
1.1 Ihe Nzuzo nke Orchid (2010)
1.2 Mgbọrọgwụ Angel (2014)
1.3 Smụnna nwanyị asaa: Akụkọ Maia (2016)
1.4 Ime ụlọ nru ububa (2019)
2 Lucinda Riley Biography
2.2 Ọrụ edemede mbụ
2.3 Akwụkwọ ndị na-aga nke ọma
2.5 Akwụkwọ Lucinda Riley
Akwụkwọ kacha mma site n'aka onye edemede
Ihe nzuzo nke orchid (2010)
Ọ bụ Julia Forrester —Pianist a ma ama— gabiga ọdachi nke ahu ewepuola isi nke ndu ya. Obi gbawara ya, ọ gaba n’ihu na-achọ nkasi obi n’akụkụ nwanne ya nwaanyị Isi, Alice. Ọnwa ole na ole gafere, na Ha abụọ na-aga njem gaa n'ụlọ obibi Wharton Park (ebe ha nọrọ oge ụfọdụ nke oge ntorobịa ha na ntorobịa), mgbe ha mụsịrị na ọ bụ maka ire ere.
Ọ na-echeta mgbe ọ bụ nwata, mgbe ya na nna nna ya Bill nwụrụ - onye na-elekọta ụlọ ahụ mara mma. Mgbe ọ bịarutere, ọ na-ezute otu enyi site na nwata, Kit Crawford, onye ikpeazụ ga-eketa ezinụlọ ahụ. O kpebie ire ala ahụ lara n’iyi nke na-enwetabeghị ndozi kemgbe ọtụtụ afọ.
Iji mezuo nzube ya, nwa okorobịa ahụ nwere mmịị na nnukwu ụlọ ahụ; Julia na-aga ihe omume ahụ. N’ebe ahụ, ọ hụrụ kwaaji nwere orchid ala ọzọ na mba Thailand, dị ka okooko osisi mara mma nke nna nna ya toro. Kitkwa nye ya akwụkwọ edetu, nke ọ chere na ọ ga-abụ nke Bill nwụrụ anwụ. N’ịbụ onye nke a juru anya, Julia gakwara n’ụlọ nne nne ya Elsie, n’amaghị na nleta a ga-ekpughe ihe nzuzo miri emi site n’oge gara aga.
Nzuzo nke ...
Mgbọrọgwụ nke mmụọ ozi ahụ (2014)
Greta agabeghị ụlọ ochie ya, Marchmont Hall, na obodo Monmouthshire ruo ihe karịrị afọ iri atọ. Enyi ya kwesịrị ntụkwasị obi, bụ́ David, onye ọ na-akpọ ịhụnanya na ya akpọwo Taffy, kpọrọ ya òkù ịlaghachi ebe ahụ ịga soro Krismas gbakọọ, bụ́ nke ọ na-anakwere ozugbo. Greta anaghị echeta ihe ọ bụla, ma obu ebe ahu, ma obu oge o biri n'ebe ahu, n'ihi nnukwu ihe ọghọm nke o chefuru ya.
Ozugbo gburugburu gburugburu - nke, ọ bụ ezie na oyi na-atụ, bụ mma - ọ na-ewe njegharị na chọpụta - N’etiti ngalaba dị iche iche— ili. Ili ahụ na-egosi na e liri nwatakịrị n’ebe ahụ. Site n'oge ahụ gawa, n'uche Greta ncheta na-amalite ịbịa nke furu efu mgbe ihe ahụ gasịrị; Taffy na-enyere ya aka ịghọta ha.
Ma otua ka esemokwu si puta, n'etiti oge abuo: XNUMXs (gara aga), na XNUMXs (akuko ugbua). Site na ebe nchekwa na ebe nchekwa Greta na-emezigharị nghọta o nwere banyere Wa ya, na nsonye nke nwa ya nwanyị Cheska, onye gbara ọchịchịrị na mkpebi siri ike na nkata ahụ, na onye omume ya dabara adaba n'obi gbagọrọ agbagọ ...
Mgbọrọgwụ nke mmụọ ozi ahụ
Smụnna nwanyị asaa: Akụkọ Maia (2016)
Maia D'Aplièse na ụmụnne ya ndị nwanyị ọ tọrọ laghachiri ebe a zụlitere ha. Ihe kpatara ya: la nwute ọnwụ Pa Salt, onye, ​​ogologo oge gara aga, nakweere ha ma rara onwe ya nye nlekọta ha. N’atụ anya ọnwụ ya, agwa enigmatic hapụrụ nwa ya nwanyị ọ bụla akwụkwọ nwere ihe ga-enyere ha aka ịmata ebe ha si.
Maia —Mgbe ị nyochachara ihe ndị ị dere n’akwụkwọ ozi a— ọ na-aga Rio de Janeiro. Mgbe ọ rutere ebe ahụ, onye protagonist ahụ hụrụ otu ụlọ ochie bibiri kpamkpam. Ihe ọ na-ajụ na-eduga ya iji chọpụta akụkọ na-aga n'ihu na 20s, mgbe a na-ewu Kraịst Onye Mgbapụta.
N'oge ahụ, akụkọ akụkọ ọhụrụ na-amalite nke gụnyere Izabela Bonifacio, nwa agbọghọ na-anụ ọkụ n'obi. Ọ na-arịọ nna ya ka o kwe ka ọ gaa Paris tupu ya alụọ. N'otu oge na Obodo nke Ìhè, nwanyị ahụ na-adaba n'ime Laurent Brouilly... na nke a na-abụ a dị mkpa zutere nke ahụ ga-aza ọtụtụ ndị Maia amaghị.
Smụnna nwanyị asaa (The ...
Ime ụlọ nru ububa (2019)
Na Admiral house, a nnukwu ụlọ na English Suffolk obodo, a ndụ nke Posy Montague. Ugbua na-abịaru afọ asaa nke afọ ya, nwanyị ahụ cheta oge uto gi n'ime enye ye ete esie ha weghaara urukurubụba naanị ịmasi mma ha ma hapụ ha. Nwaanyị a meworo agadi na-echetakwa oge ọchịchịrị nke mere ka a mata ya n'oge ndụ ya niile.
Na Posy ọ ga-abụrịrị nwanyị di ya nwụrụ nke mbụ, ya mere naanị ya zụlitere ụmụ ya abụọ: Nick y Sam. Ọnọdụ ya ugbu a dugara ya ime mkpebi tinye ụlọ ezinụlọ ahụ maka ire ere —Nke a n'agbanyeghị na ọ hụrụ ihe onwunwe n'anya, tụmadị maka ọmarịcha ogige ahụ ọ raara onwe ya nye ya ihe karịrị afọ 25. Ihe kpatara ya: Admiral ụlọ na-emebi ngwa ngwa, na Montague, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri asaa, enweghị ike ịkwụ ụgwọ mmezi ahụ.
Na mgbakwunye na nke a kọwara n'elu, onye isi nne ga-eme ihe nsogbu ndị ọzọ gbara ya gburugburu. Nwatakịrị nwere nsogbu mmanya, ịhụnanya ochie nke pụtaghachiri ikpughe ihe nzuzo, na gara aga nke ọ na-amaghị, nke zoro na mgbidi nke mansion.
Akụkọ a na - abịa na - aga n’agbata 1943 na 2006, n’ime ya e gosipụtara akụkọ ihe mere eme n’oge gara aga nke jupụtara na mkpebi na-ezighi ezi nke nwere mmetụta dị ukwuu na ugbu a na na ọ bụ naanị ezi ịhụnanya nwere ike ịgbaghara.
Ime ụlọ nke ...
Lucinda Riley Biography
A mụrụ Lucinda Edmonds na Fraịdee 16, 1968 na Lisburn, Ireland. Ọ dịrị ndụ ruo afọ isii na obodo Drumbeg. Mgbe ahụ, ya na ezinụlọ ya kwagara England, ebe ọ jikọtara ọmụmụ ihe mbụ ya na klaasị balet. Dịka nwata, onye ode akwụkwọ nwere ezigbo echiche, n'oge oge ya ọ masịrị ịgụ na ide akụkọ nke ọ were ejiji nne ya were mee nke a.
Site na nwata, ima ima Lucinda maka ime ihe ngosi bu ike. Mgbe ọ dị afọ 14, ọ gara London, bụ ebe ọ debara aha na ụlọ akwụkwọ mmuta na ịgba egwu. Mgbe afọ atọ nke nkwadebe, ọ natara isi ọrụ nke usoro Akụkọ nke Ndị Na-achọ Akụ, na netwọk telivishọn BBC N'ikpeazụ, ọ rụrụ ọrụ afọ asaa n'usoro na ọkwa ọkachamara na Teatro, telivishọn na sinima.
Ọrụ edemede mbụ
Na afọ 23 mgbe ike gwụrụ na ọkụ ọkụ, Riley achọpụta na ọ bụ nje Epstein-Barr. Ọrịa a mere ka ọ dina n’elu ihe ndina ya ogologo oge. N'oge a, dere akwụkwọ mbụ ya, Ndị hụrụ na ndị egwuregwu egwu (1992). Ọ bụ ezie na ọ dịghị enwe mmetụta dị ukwuu, ọrụ ahụ ghọrọ ihe mkpali. Site n’oge ahụ gawa, nwanyị nwanyị Irishman ahụ mere ka ndụ ezinụlọ ya kwekọọ na nke edemede, wee gaa n’ihu akwụkwọ akụkọ asatọ ọzọ.
N'ihi nsogbu ya na LMT (imegharị mmerụ ahụ) na hyperactivity, kpebiri ịzụta dictaphone ka ọ ghara iwepụta oge dị ukwuu ịnọdụ n'ihu kọmputa ahụ. Nke a mere ka ọrụ ha dị mfe.
Akwụkwọ ndị na-aga nke ọma
N'ime afọ 18 sochirinụ, onye ode akwukwo lekwasiri anya ike udiri akwukwo no na ahiama ihe ọ ga-amasị agụ onwe ya. Na akụkọ ya ọ gbakwunyere, na mgbakwunye, nkọwa akụkọ ihe mere eme nke mere ka atụmatụ ahụ banyekwuo na ndị na-agụ ya.
Ihe ndị ahụ e kwuru n'elu bụ ihe na-eme ka anyị mata nke ahụ otu onye ode akwukwo kwuru: "Ruo mgbe ebighi ebi M na e mmuo mmasị gara aga ma na-agụ akwụkwọ akụkọ. Oge kachasị amasị m bụ 1920s / 30s na ndị edemede dị ebube dịka F. Scott Fitzgerald na Evelyn Waugh ”.
Ọ dị ka nke a Na 2010 o bipụtara ihe ga-abụ ọrụ ga-ewetara ya otuto na mba ụwa: Ihe nzuzo nke orchid. Ihe omuma a nwere otutu uzo ahia ogologo oge. Usoro a bụ ihe ama ama na ọrụ anọ Riley na-esote bestsellers.
En Disemba nke 2012, kpebiri ịmalite na saga saga nke metụtara ụfọdụ ụmụ agbọghọ na nna ha enigmatic, nke ọ kpọrọ: Sistersmụnne nwanyị asaa. Site na mbido, mbipụta rụpụtara ihe ịga nke ọma zuru ezu. N'ihi ya, na 2014 ọ malitere ibipụta akwụkwọ na usoro isiokwu a kwa afọ, nke e nweela okpukpu asaa ruo ugbu a.
Tụrụ anya ya que en el 2022 ga-ebipụta Atlas: Akụkọ nke Pa Salt, dị ka ihe mgbakwunye na saga. Ka o sina dị, ọnwụ atụghị anya nke ode akwukwo were uzo ọdachi ka atụmatụ. Otú ọ dị, nwa ya nwoke, Harry Whittaker, O kwuru na ya ga-eme ya ya na uche nne ya ma buru onye isi n’ibu uzo en mmiri nke 2023.
Na nke a, Whittaker kwuru, sị: “Mama agwawo m ihe nzuzo nke usoro ahụ, m ga-emezu nkwa m kwere ịkọrọ ha ndị na-agụ ya.”. Nwa okorobịa ahụ ga-abụ onye na-ede akwụkwọ ọrụ ahụ.
Lucinda riley nwụrụ na June 11, 2021, na 53 afọ. Ndị ikwu ya kwupụtara ọnwụ ya site na nkwupụta, mgbe m lụsịrị ọgụ ruo afọ anọ megide ajọ ọrịa kansa.
Nwata nwanyi no n’elu ugwu (2011)
Ọkụ dị n'azụ windo (2012)
N'etiti abalị bilie (2013)
Ihe nzuzo Helena (2016)
Akwụkwọ ozi echefuru (2018)
Thelọ nru ububa (2019)
Saga Sistersmụnne nwanyị asaa
Smụnna nwanyị asaa: Akụkọ Maia (2014)
Nwanyị Storm: Akụkọ Ally (2015)
Onyunyo Nwanne: Akụkọ nke Star (2016)
Nwanyị Pearl: Akụkọ CeCe (2017)
Nwanyị Ọnwa: Akụkọ Tiggy (2018)
Nwanyị Sun: Akụkọ Electra (2019)
Nwanyị Nwanyị furu efu: Akụkọ Merope (2021)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ Lucinda Riley
Blue Jeans. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ogige ahụ
Jesus Nwoke. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke nkuzi nke onyinyo